Blaogim-Piarahamonina GV · Oktobra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny Blaogim-Piarahamonina GV tamin'ny Oktobra, 2019
Efa mandeha ireo vohikala vaovaon'ny Lingua amin'ny teny Igbo sy Santali
Nanokatra vohikala ho an'ny teny Igbo sy Santali ny Global Voices!
Miara-miasa anatinà tetikasam-bondrompiarahamonina ireo mpikambana ao amin'ny Global Voices Tiorka!
Mitady tomponandraikitra izahay mba hitantana ny asa fandikàna ataon'ny tarika Lingua Frantsay!
Dika 21 Oktobra 2019
(Fanamarihana : Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktobra 2015) Tratry ny Alatsinainy finaritra daholo isika! Antenaiko fa tsara fanombohana ny herinandronareo tsirairay avy! Androany eto amin'ny tanin'ny mpandikateny, horesahantsika ny… Asa fandikana vatsian'ny Amazon VAOVAO GOAVANA! Ny 13 Oktobra 2015, nanambara ny marik'i Amazon, AmazonCrossing, fa hahazo vola 10 tapitrisa dolara...
Hafanam-po 18 Oktobra 2019
Io hatrany no hany viza nitondra ahy nivezika tetsy sy teroa, ny taokanto